Tag: brik-na-ngwa agha | Martech Zone
Anyị na-ekerịta ụfọdụ ihe atụ na nso nso a banyere etu Enterprise IoT (Intanet nke Ihe) nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu nke ire ahịa ụlọ ahịa na-ere ahịa. Nwa m nwoke nọ na-ekerịta akụkọ akụkọ na m na-ere ahịa nke gosipụtara ụfọdụ ọnụ ọgụgụ jọgburu onwe ya banyere mmalite na mmechi nke ụlọ ahịa mkpọsa. Ọ bụ ezie na ọdịiche nke mmechi ahụ na-abawanye, ọ dị mkpa ịghọta na mba a na-aga n'ihu ịmepe ọtụtụ ụlọ ahịa na-ere ahịa. Ọbụna Amazon, nke a na-akpọ mkpọsa
Friday, May 26, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Omnichannel azum na-abụwanye ihe a na-ahụkarị iji mejuputa ka ndị na-eweta igwe ojii na-ere ahịa na-enye mmekọrịta siri ike na mmụba nke usoro gafee njem ndị ahịa. Ndepụta njikọ na kuki na-eme ka ahụmịhe na-enweghị ntụpọ ebe, n'agbanyeghị agbanye ọwa ahụ, ikpo okwu nwere ike ịmata ebe onye na-azụ ya nọ ma kwalite ozi ahịa dị mkpa, metụtara ọwa ahụ, ma duru ha gaa zụọ. Gịnị bụ Omnichannel? Mgbe anyị na-ekwu maka ọwa n'ahịa, anyị na-ekwu maka ya